Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Itoobiya oo gadooday – Radio Daljir
Oktoobar 11, 2018 8:44 b 0
Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Itoobiya ayaa boqolaal ka mid ah la arkayay saakay, iyagoo cabasho ka dhigaya waddooyinka magaalada Addisababa gaar ahaan qayb ku dhow xafiiska raysal wasaare Abey.
Ciidamadan ayaa ka cabanaya mushaar kordhin la’aan, waxaana ay saamaysay isku socodka dadka iyo gaadiidka.
Raysal wasaare Abey iyo kixgeenkiisa oo usoo baxay ayaa ciidamada ku amray inay jimicsi sameeyaan, taasi oo ay ciqaab uga dhigeen, waxaana la arkayay saacado kadib iyagoo faraxsan oo goobta ka dhaqaaqaya.
Arrintan ayaa saamaysay qadka internetka taleefanada gacanta oo ay dowladda ay si KMG ah u joojisay.
Macalimiin lagu dilay Mandheera